Mitambo | TeraNews.net |
Cambridge Audio EVO150 All-in-One Player - Overview
Teac UD-301-X USB DAC - muchidimbu, maficha
Denon PMA-A110 Yakabatanidzwa Stereo Amplifier - Overview
Black Shark 4 Pro i smartphone yekutamba ine mukana mukuru
DAC ine mahedhifoni amplifier iFi NEO iDSD
iFi NEO iDSD musanganiswa wekuteerera, mupfungwa izere yeshoko. Audio michina inosanganisa DAC, preamplifier uye ...
STALKER 2 kuburitswa kwakamiswa zvakare - ikozvino kusvika 08.12.2022/XNUMX/XNUMX
Iyo inopisa yakakakavadzana-yekutamba shooter STALKER 2, iyo yakarongerwa kuburitswa muna Kubvumbi 2022, yakamiswa zvakare. Zvino ku…
Ugoos UT8 uye UT8 Pro paRockchip 3568 - muchidimbu, zvakatemwa
Isu tose tinoyeuka zvakanaka zviyedzo zvisina kubudirira zvevagadziri veChinese neRockchip platform. Set-yepamusoro mabhokisi akaburitswa muna 2020-2021 ...
Samsung zvakare yakachiva mari yevamwe vanhu
Sezviri pachena, hofori yeKorea Samsung yapererwa nemazano ekuwedzera bhizinesi. Iyo kambani yakazivisa kutanga kwegore ...
Microsoft yauya nemhinduro inonakidza yevaridzi kana mafani eXbox Series X. Mini-firiji ye ...
TV-BOX T-95 Plus: hunhu, pfupiso
Kuvhurwa kweROCKHIP nyowani 3566 Set-Top Bhokisi Chips yakavhura mikana mitsva. Ivo vane hanya nekukura ...
ASUS ROG pakarepo noodles - unozvida sei izvi, Elon Musk?
ASUS ROG (Republic of Gamers) akateedzana zvigadzirwa zvemitambo zvinozivikanwa nevanhu pasi rese. Wese munhu anoziva kuti ROG iri ...
REDRAGON Libra yekutamba bonde nemutsago - kuongorora
Kusarudza pakati peyakajairika mbeva padhi uye yemitambo pamusoro, vatambi vanonzwa kurasikirwa. Ndinoda ku…
Ndezvipi zvirinani kutenga TV - ine kana isina Smart TV
Zvitoro zvemagetsi zvakaneta nekushambadzira kwavo. Mutengesi wese, achiedza kutengesa TV kumutengi, anorumbidza maitiro, ...
ASUS ROG Strix GS-AX5400 - rauta ine kugona kwemitambo
Iyo yeTaiwanese ASUS brand yakazviratidza pachayo mune ye network zvishandiso musika. Kutanga, akateedzana emaraira anotsigira Mesh tekinoroji, ...
Apple TV 4K pane iyo SoC A12 Bionic chip uye ine isingazivikanwe kure kure
Kuziviswa kweApple TV 4K set-yepamusoro bhokisi kwakaenda chinyararire uye kusingaonekwe. Mugadziri haana kurumbidza chigadzirwa chake chitsva, ...
Xbox Series S kana Series X - zviri nani
Sony, ine PlayStation yayo, haisi kuyedza kuisa vatengi muzvikamu. Wese munhu anoziva zvechokwadi kuti iyo imwechete Sony ...
Kutonhorera TV-BOX - Beelink GT-King PRO, yakashanyira ongororo yedu gore rapfuura. Naizvozvo, chitsva pamusika kubva kuChina mhando ...
EPIC Mitambo irikupa mutambo wechechi Rage 2 mahara.Kusimudzira kweasati kwamboitika rupo kwakatangwa muna Kukadzi 19, 2021 uye kunopera pa ...
Elon Musk's Tesla Runhare ine Yemahara Starlink Internet
Varume muNhema: Nyika dzese ("Varume muBlack 4")
Apple Inowana Shazam rights